Togag samaysma xilli roobaadka oo dhibaato ku haya deegaanno hoos yimaada Xudur. | Somali National Television - sntv.so
Home KOONFUR GALBEED Togag samaysma xilli roobaadka oo dhibaato ku haya deegaanno hoos yimaada Xudur.
Togag samaysma xilli roobaadka oo dhibaato ku haya deegaanno hoos yimaada Xudur.
Previous articleXuska Maalinta Calanka Soomaaliyeed.
Next articleHorjooge ka tirsan Al-Shabaab iyo darawalkiisa oo maanta la xukumay.